Waa maxay nooca arrimaha ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano muujinta LED-ka banaanka?
Bandhigga banaanka ayaa diiradda saaraya dayactirka, kaas oo la kulmay dabayl iyo roob. Marka waxaan u baahanahay inaan doorano sheyga ugufiican, oo hada soo badanaya soosaarayaasha soo bandhiga LED taasoo keentay tayada xun ee muujinta LED-ka oo aan ahayn nidaam ilaalin oo wanaagsan.
Habka / tallaabada
Macaamiil badan ayaan caddeyn arrimaha ka dib markii ay soo iibsadeen soo-bandhigga LED-ka banaanka oo aan fiiro gaar ah u helin dammaanadda tayada.
Bandhigga gudaha iyo banaanka LED-ku waa laba nooc oo jawi shaqo ah, oo looga baahan yahay muujinta banaanka banaanka ee loo baahan yahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan jawiga banaanka.
Fadlan la soco qodobbada soo socda:
1. Bandhigga waxaa loo rakibay bannaanka, inta badan qorraxda iyo roobka, dabaysha iyo busta dusha, jawiga shaqada oo liita. Qalabka elektaroonigga ah ayaa qoyan doona ama qoyaan daran ayaa sababi kara wareeg gaaban ama xitaa dab, oo sababi kara shaqeyn ama xitaa dabka, oo sababa khasaare.
2. Bandhigga waxaa sababi kara danab hilaac xoog leh oo ku dhaca aagga birlabta.
Heerkulka jawigu aad buu isu beddelaa. Bandhigu isagu wuu iskiis u shaqeeyaa si uu u soo saaro qadar cayiman oo kuleyl ah, haddii heer-kulka deegaanku aad u sarreeyo oo kuleylka liita, wareegga isku-dhafan ayaa laga yaabaa inuu si aan caadi ahayn u shaqeeyo, ama xitaa la gubo, sidaa darteed nidaamka bandhiggu si habboon uma shaqeyn karo.
3. Dhageysteyaal ballaaran, baahiyaha aragtida, baaxadda ballaaran ee shuruudaha aragtida, isbeddelada waaweyn ee iftiinka deegaanka, gaar ahaan, waxaa laga yaabaa inay u soo baxaan qorraxda tooska ah.
Shuruudaha gaarka ah ee kor ku xusan, banaanka banaanka waa in lagu sameeyaa arimahan:
Marka hore, shaashadda jirka iyo dhismaha waa inay ahaadaan kuwo isku dhafan oo adag oo ka hortagga biyuhu iyo daadashada.
Jirka shaashadda waa inuu ahaadaa mid ku jira tallaabooyinka dheecaanka wanaagsan, marka dhacdada biyaha si habsami leh looga bixi karo. Ku rakib aaladaha ilaalinta hillaaca bandhigyada iyo dhismayaasha. Mawduuca bandhigga iyo qolofka si loo ilaaliyo aasaaska wanaagsan. Iyo caabbinta dhulka waxay ka yartahay 3 ohms, hillaac oo ay sababtay dheecaanka waqtiga ku jira ee hawo weyn.
Marka labaad, rakib qalabka hawo qaboojinta, si shaashadda ugu jirto heerkulka u dhexeeya -10 ℃ -40 ℃. Sidoo kale rakibay taageere axial gadaashiisa dusha sare ee shaashadda, marka laga reebo kuleylka.
Adeegso heerkulka qalliinka ee -40 ℃ -80 ℃ inta udhaxeysa qalabka isku-dhafan ee isku-dhafan ee heerka warshadaha si looga hortago heerkulka jiilaalka inuu aad u hooseeyo si bandhiggu uusan u bilaaban karin.
Ugu dambeyntiina, si loo hubiyo in deegaanka ay ku jirto muuqaalka dheer ee fog, waa inaad isticmaashaa dyoodh iftiin aad u sarreeya-dhalaya.
Xulka xulashada warbaahinta ayaa dooranaya xagal muuqaal cusub oo ballaadhan, midab saafi ah, iskuduwid joogto ah iyo in kabadan 100,000 oo saacadood oo cimri ah. Baakadaha dibedda ee muuqaalka muuqaalka ayaa ah kuwa ugu caansan daboolka dhinaca wejiga tubbada laba jibbaaran, silsiladda silikooniga ah, ma laha iskuxir biraha ah. Muuqaalkeeda qurxoon ee qurxoon, waara, oo leh sun-diidka qorraxda, siigada, biyaha, heerkulka sare, shan astaamood.